भिमानमा चुनावी माहोल बढाउदै चौलागाई « Sindhuli darpan
२७ बैशाख २०७९, मंगलवार २२:३७
डिल्लीराम चौलागाई तत्कालिन भिमान गाउँ पञ्चायतको उप प्रधानपञ्च थिए उनका छोरा चित्र नारायण चौलागाई २०५४ सालमा एमालेबाट कमलामाई नगरपालिका १२ भिमानको वडा अध्यक्ष भए र अहिले नाती राजु चौलागाई विस्तारित कमलामाई नगरपालिका ९ भिमानको वडा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । गत निर्वाचनमा अन्त्यन्तै झिनो ४ मतको जित निकालेको एमाले अहिले पञ्चायत काल देखि राजनीतिमा चर्चित चौलागाई परिवारको सदस्यलाई उम्मेदबार बनाएर फराकीलो मत अन्तरले चुनाव जित्ने तयारीमा छ ।
हजुर बुवा पञ्चायतकालमा उप–प्रधानपञ्च हुँदा होस् वा वुवा २०५४ सालमा वडा अध्यक्ष हुँदा वा अहिले राजु आफै राजनीतिमा सक्रिय भईराख्दा चौलागाई परिवारले भिमानका जनताको सेवामा कुनैपनि कसर बाँकी राखेनन् । जनताको सुख दुःख पिर मर्का, नागरिकता पासपोर्ट लगायतका प्रशासनीक काममा झमेला पर्दा सर्वसाधारणले राजनीतिक भेदभाव विना चौलागाईहरुको सहयोग पाए । जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा तत्कालै जिल्ला प्रशासन, प्रहरी चौकी, आराम विराममा एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यचौकी र अस्पताल धाउन उनिहरुले न त दिन भने न रात भनेर गाह्रो नै माने । भिमान क्षेत्रको पुराना वस्तीहरु सुके खोला, चुरे, इनारपानी लगायतका ठाउँमा वस्ती बसाल्ने काम चौगालाईहरुले नै गरे ।
पञ्च हजुरबुवाका नाती राजु चौलागाई विगतमा कांग्रेस थिए । उनले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन कांग्रेसबाट नै वडा सदस्यमा चुनाव लडेका थिए तर पराजय बेहोर्नु प¥यो । कांग्रेसबाट चुनाव लडेपनि चौलागाई विस्तारै एमाले अध्यक्ष के.पि. ओलिबाट प्रभावित भए, देश विकासको शिलशिलामा ओलिले देखाएका सपना र बाटो उनलाई मन प¥यो आफ्नो स्वभाव नै एमालेको निति शिद्धान्तसँग मिलेको महसुस भएपछि उनि एमाले प्रवेश गरे । अहिले उनलाई एमालले कमलामाई नगरपालिका ९ भिमानको वडा अध्यक्षको टिकट दिएको छ । हजुरवुवा, बुवाले गरेका राम्रा काम र आफूले राजनीतिमा लागेर जनतालाई गरेको सेवाको आधारमा चौलागाई अहिले भिमानमा दैनिक दूई तीन सय बढिको ¥यालि सहित जनताको घर दैलोमा भोट माग्न हिडिरहेका छन् । उनले बैशाख १२ गते वडा अध्यक्षमा उम्मेदबारी दर्ता गराए देखि यता करिव २ सय लाई एमालेमा प्रवेश गराईसके । ति मध्य अधिकांश नेपाली कांग्रेस छन् । भिमानमा उनको मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस सँग नै हो । माओवादीले त त्यहा उम्मेदबारी नै दिन सकेन । भन्नका लागि गठबन्धनलाई सहयोग गरेर कांग्रेसलाई छोडेको भने पनि अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीबाट वडा अध्यक्ष लडेका शुरेश गुरुङले १९२ मत मात्र ल्याएका थिए । जवकी एमालेका देवराज पौडेलले ९७० मत प्राप्त गरेका थिए । पछिल्लो पाँच वर्षमा माओवादीहरु त लगभग सकि सकेका छन् । उनिहरुले कांग्रेसलाई सहयोग गरे पनि मतमा खासै फरक पर्नेवाला छैन । हिजो कांग्रेसमा बसेर काम गरेका कारण उनिमाथि कांग्रेसको सत्भाव छ । उनका कतिपय साथिहरु पार्टी प्रवेश गरेर एमालेमा आईसके भने कति कांग्रेसमै बसेर सहयोग गर्न बचनबद्ध छन् । हजुरबुवाका पुराना साथिहरु तत्कालिन उप प्रधानको नाती भनेर माया गर्छन, केहि राप्रपाहरु पनि छन् तिनिहरुले पनि राजुलाई नै मत दिने बाचा गरेका छन् । चौलागाईको चुनाव प्रचार शैली र जनता सँग प्रस्तुत हुने कलाका कारण एमालेबाट मेयरका उम्मेदबार महेन्द्रदेव श्रेष्ठ पनि उत्साहित छन् । उप मेयर मञ्जु देवकोटाको घर पनि वडा नं. ९ भिमान नै हो । भिमानको ठूलो मत चौलागाईंको मेहनत वडा अध्यक्ष जित्नका लागि मात्र होइन एमालेले कमलामाई नगरको मेयर उपमेयर दुवै पद जित्नका लागि समेत महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी सरह मत आएको वडा नं. ९ मा यो पटक मेयर उपमेयरले सोचे भन्दा बढि मत पाउने बातावरण निर्माण भएको छ । यसको अगुवाई वडा अध्यक्षका उम्मेदवार राजु चौलागाईले गरेका छन् । त्यो लहर दैनिक बढिरहेको छ ।